05 | février | 2021 | InfoKmada
Accueil 2021 février 5
Archives quotidiennes: 5 février 2021
Ambatolampy-Tsinjoarivo : mandroso ny asa fanatsarana ny lalana mirefy 45 km
InfoKmada - 5 février 2021 0
Miroso ny asa fanatsarana ny lalana mampitohy ny tanan’Ambatolampy sy Tsinjoarivo izay tanterahin’ny eo anivon’ny minisiteran’ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ankehitriny. Tafiditra amin’izany ny fanamboarana ireo lalana sarotra hivezivezena ho fanamorana ny fivoahan’ireo vokatra any an-toerana. Nijery ifotony ny fandrosoan’ny asa tany an-toerana androany ny tomponandraikitra.
FEC : ho fantatra ny volana martsa ny famatsiam-bola ho sitrahana
Ny volana martsa izao no nambaran’ny minisitry ny toekarena sy ny fitantanam-bola ho mety ahafantarana mazava ny vola ho sitrahan’i Madagasikara amin’ny alalan’ny FEC na ny facilité Elargie du crédit. Sehatra maro no hampiasana ny famtsiam-bola io raha ny fanazavana, ary hisy ny fanitsiana ny tetibolam-panjakana aorian’ny fisitrahana izay.
Raharaha volamena : mihazakazaka ny fivoaran’ny toe-draharaha
Mihazakazaka ny fivoaran’ny toe-draharaha momba ilay volamena 73,5kg sarona tatsy Afrika Atsimo. Nahazo alalana tamin’ireo tomponandraikitra isan-tokony ny fiaramanidina nidondra ilay volamena hoy ny haino aman-jery France 24 araka ny antotan-taratasy hitan’izy ireo manamarina izany.
GEM-FHORM : mangataka ny hisokafan’ny sidina rezionaly
Hiotra lavitra ny 3200 miliara Ariary ny mety ho fatiantoka eo amin’ny sehatry ny fizahantany amin’ity taona ity raha toa ka tsy hisy ny fisokafan’ny sisin-tany, araky ny nambaran’ny FHORM na ny fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar. Manoloana io, manao antso avo amin’ny fitondram-panjakana izy ireo hanokatra ny sidina rezionaly sy ny aty Afrika manomboka ny volana aprily 2021 izao. Fepetra maro no afaka atao ahafahana manatanteraka izany anatin’ny fisorohana ny fipariahan’ny Covid-19 raha ny fanazavana.
Vary avy eto an-toerana : tsy manaja ny antanatohatry ny fanjifana ny mpivarotra
Maro ny antony mampiakatra ny vidim-bary vokarina avy eto antoerana. Isan’izany ny tsy fanajan’ny mpisehatra anatin’ny seha-pihariana vary ny Circuit de distribution indrindra ny mpanelanelana maka tombony mihompampana. Nandraisana fepetra avy hatrany ny mpisehatra tsy manara-dalàna ary maro ny tsena nakatona mandra-pamitana ny fanadihadiana.